Sida loo abuuro saamaynta saddex geesoodka ah ee pixelated | Abuurista khadka tooska ah
Sida loo abuuro saamaynta saddex geesoodka ah ee pixelated
Jorge Neira | | Tababarada
Naqshadeynta naqshadeynta ayaa ka mid ah meelaha aqoonta badan ku baahsan adduunka maanta.
Tani waxay sabab u tahay habka ay dadku u heli karaan anshaxdan iyada oo aan loo baahnayn inay galaan machad jaamacadeed si ay u awoodaan inay ku dhaqmaan aqoonta lagu baranayo dhexdooda waana taas maanta, qof kasta oo diyaar u ah saacado u hur tababarka iyo tafatirka Waad qaban kartaa shaqooyin yaab leh, wax walbana waxay ku xirnaan doonaan inta badan dadaalka iyo u heellanimada uu qof walba doonayo inuu siiyo shaqooyinkiisa.
Naqshadeynta sawirada waxaa ku jira laba waji oo waaweyn, naqshad iyo farshaxan, isku darka keenay dad aad u tiro badan oo daneynaya la shaqeynta noocan ah barnaamijka tafatirka. Waxaan sidoo kale ka hadli karnaa arin dhaqan oo loo dhan yahay waxayna umuuqataa inay jiraan meelaha naqshadeynta garaafka loogu talagalay naqshadeynta moodooyinka qoraalka qaabka magaalada, sidaas darteed keenaya tiro aad u badan oo macaamiil ah iyo nashqadeeyayaal daneynaya inay ku bixiyaan adeegyadooda ku-dhaqanka aaggan.
Adobe Photoshop waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu caansanway jiraan. Xaqiiqdii, dad badan ayaa badanaa la xiriiro naqshadeynta markii ugu horreysay iyada oo loo marayo softiweerkan, sidaa darteed maanta waxaan ku tusi doonaa tallaabooyinka lagama maarmaanka u ah inaad sameyso mari saamaynta pixelated-ka saddex-geesoodka ah.
Tutorial si loo abuuro saameyn pixelated saddex geesood ah
Waxaan doorannaa sawirka aan dooneyno inaan wax ka bedelno.
Waxaan ka fureynaa sawirka Photoshop iyo waxaan abuureynaa 2 lakab asalka.
Waxaan joognaa lakabka "Taariikhda hore" waxaanna ku dhaqaajineynaa qalabka isbeddelka bilaashka ah ee leh CTRL / Cmmm + T. Xulashada 3, waxaan u qaabeyneynaa sagxadda hoose ee menu-ka qalabka, waxaan ku hagaajineynaa rabitaanka ilaa 45 darajo oo aan ku dhammeynaa isbeddelka 'Enter'.
Adigoon ka dhaqaaqin lakabka aan dooranay, waxaan aadeynaa filter / Pixelate / Muuse oo waxaan u dhignay cabirka unugyada 40.
Waxaan u dejinay awoodda lakabkan 50.
Waxaan dhaqaajineynaa lakabka "Nuqul Sanduuqa" ka dibna ku celi isla talaabooyinkii lagu qaaday "Fondo Copia 2" laakiin xagjirnimada ka soo horjeedka ah, taasi waa, xagal qiyaastii -45 digrii ah.
Waxaan sidoo kale ku dabaqnaa isla filterka mosaic.
Waxaan mar labaad u adeegsanaa aaladda isbadalka lakabka oo aan dejino Janjeeri siman oo ah 45 darajo, hoos u dhigida mugdiga illaa 70%.
Waxaan ku codsaneynaa isla filter mosaic ah lakabka asalka ah iyo voila, shaqadeena waxaa laga heli doonaa hoosta pixelation-ka saddex-geesoodka ah.
Kuwani waa tallaabooyinka la qaadayo soo saar saamaynta pixelated-ka saddex-geesoodka ah. Tallaabooyinku waxay u baahan yihiin dulqaad, si kastaba ha noqotee iyo ku celcelin ahaan, kuwani way fududaan doonaan in la qabto, taas oo noo oggolaan doonta ku dar farsamadan liistada hababka iyo codsiyada kaas oo aan ku saxi karno isla markaana wax ka beddeli karno sawirrada qaarkood.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Tababarada » Sida loo abuuro saamaynta saddex geesoodka ah ee pixelated